नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई चिप्लिन्छन कि चिप्लाउँछन् बालुवाटार प्रकरणमा ?
माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई चिप्लिन्छन कि चिप्लाउँछन् बालुवाटार प्रकरणमा ?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १५ कात्तिकमा फैसला सुनाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउने मिति तोकेको हो । काठमाडौँको बालुवाटारस्थित
ललिता निवासको सरकारी जग्गा नेता नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिको नाममा सार्ने गरी निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय नीतिगत भएको भन्दै अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।